Tababaraha Kooxda Man United Jose Mourinho Oo Si La Yaab Leh Isaga Difaacay Dadka Ku Dhaleeceeya In Uuna Daqiiqado Badan Ciyaarsiin Xiddiga Marcus Rashford Sharaxaad La Yaab leh Oo Uu Sameeyay Xilli Uu Ku Digtay Tababarayaasha Chelsea & Liverpool Ee Sarri & Klopp – Kooxda.com
Tababaraha Kooxda Man United Jose Mourinho Oo Si La Yaab Leh Isaga Difaacay Dadka Ku Dhaleeceeya In Uuna Daqiiqado Badan Ciyaarsiin Xiddiga Marcus Rashford Sharaxaad La Yaab leh Oo Uu Sameeyay Xilli Uu Ku Digtay Tababarayaasha Chelsea & Liverpool Ee Sarri & Klopp
Tababaraha Kooxda Man United Jose Mourinho ayaa difaacay qaabka uu u ciyaarsiiyo xiddiga Marcus Rashford isaga oo sidoo kale ku digtay tababarayaasha kooxaha Liverpool iyo Chelsea ee Maurizio Sarri iyo Jurgen Klopp.
Rashford ayaa dhaliyay 2 gool kulamadii uu u ciyaaray xulkiisa kulamadii caalamiga ahaa isaga oo ka ciyaarayay weerarka tooska ah xilli uu halyeeyga Liverpool ee Jamie Carragher kula taliyay 20 jira in uu isaga tago Old Trafford si uu u badbaadiyo xirfadiisa.
Xiddiga ayaa ka dambeeya xiddigaha Romelu Lukaku iyo Alexi Sanchez laakiin da,yarka ayaa ah xiddiga daqiiqadaha ugu badan ciyaaray Man United tan ilaa markii uu jose mourinho qabtay kooxda.
Mourinho oo ku digtay daqiiqadaha ay ciyaaraan xiddigaha Ruben Loftus-Cheek iyo Dominic Solanke ee kooxaha Liverpool iyo chelsea ayaa dib isaga weeraray dadka dhaleeceeya.
Isaga oo ka hadlay arintaas Marcush Rashford ayuu yidhi”Waxan u malaynayaa in sabtida la igu dhaleecayn doonaa in aanan ciyaarsiin Marcus Rashford” isaga oo Mourinho ku kaftamaya waliba og in uu Rahford ganaaxan yahay kulanka Watford.
“Sababta oo ah dadka qaar ayaa jecel in ay mar walba iga hadlaan halka qaar kale dhibaato igu qabaan igana sheegaan beeno, sidaas darteed waxa aan filayaa in ay dadka qaar waxa ugu horeeya ee ay bari ka fikiri doonaan tahay Jose Mourinho”.
“Sidaas darteed waxa aan Filayaa in Axada la igu dhaleecayn doono in aanan ciyaarsiin Marcus laakiin ma ahan khaladkayga, sidaas darteed waa in aad ogaataan in uu ganaaxan yahay oo uuna ciyaari karin”.
Mourinho oo ka hadlay daqiiqadihii uu ciyaaray Rashford ayaa yidhi” Xilli ciyaareedkii 2016/2017 Rashford ayaa ciyaaray 32 kulan oo premier League ah, 11 kulan oo Europe League oo uu ku jiro finalkii, 3 FA Cup, 6 League cup oo uu ku jiro final iyo Cummunity Shield,waxa uu ciyaaray 53 kulan oo tartamada oo dhan ah, laakiin hadii aad daqiiqadaha eegto waxa uu ciyaaray 3068 hadii aad 90 daqiiqah kulanka u qaybiso waxa uu ciyaaray 34.2 Kulan xilli ciyaareedkii hore”.
“Xili ciyaareedkii 2017/2018 waxa uu ciyaaray 35 kulan oo premier League ah, 8 champions League ah, 5 FA Cup ah 3 League cup ah iyo Finalkii UEFA Supe Cup waxana uu ciyaaray 52 kulan oo tartamada oo dhan ah isaga oo daqiiqadaha ciyaaray 2.676 daqiiqo hadii aad u qaybiso 90 Daqiiqo waxa uu ciyaaray 297 kulan sidaas darteed waxa uu ciyaaray 105 kulan, 5774 daquuqo oo uu ka mid yahay shan final”.
Mourinho ayaa kadib daqiiqadaha Rashford garab dhigay xiddigaha Liverpool iyo Chelsea kuwaas oo ku fashilmay in ay daqiiqado badan u ciyaaraan kooxohooda.
“Marcus Rashford ma ahan Dominic Solanke,Mana ahan Ruben Loftus-Cheek, Rashford waa xiddig Man United ah oo kooxdiisa u ciyaaray kulamo badan kana ciyaaray tartamada ugu waaweyn kuna ciyaaray heerkiisa ugu sareeya, hadaba kalita Taageeerayaasha United waa in ay ogaadaan waxa aan u qabanayno xiddiga Marcus Rashford, Luke Shaw, Jesse Lingard, Scott McTominay” ayuu Mourinho yidhi.